Trump oo markale weerar afka ah ku qaaday Ilhaan Cumar - Awdinle Online
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markale weerar afka ah ku qaaday Ilhaan Cumar oo ka tirsan Congreska Mareykanka.
Wuxuu sheegay in Ilhaan ay tahay qof musuq maasuq badan isla markaana warbixinadeeda uu la socday muddo labo sano ah.
“Maxaa ka khaldan Ilhaan Cumar? waxaan rajeynayaa in hawshan uu soo faragelin doono Xeer ilaaliyaha guud, Waxaan aqrinayay warbixinnadeeda muddo labo sano ah oo ku saabsan sida ay u musuqmaasuq badan tahay , Miyad rumaysanaysaan? Sidaas weliba ayay inoogu sheegeysaa sida dal loo maamulo? Waa maxay waxa ay samaysay qofkii ay reer Minnesota doorteen, maxaa baas ee idin ka khaldan dadyahow”
Dhanka kale, Trump wuxuu musharraxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ku eedeeyay in gobolka Minnesota uu doonayo in uu ka dhigo xero qaxooti.
Wuxuu sidoo kale sheegay ‘in Biden uu doonayo in uu meesha ka saaro xayiraadda dhanka safarka ah ee lagu soo rogay muwaadiniinta dalalka ay taagan yihiin dagaallada’
“Boqolkiiba toddbaadtan korodh ah dad qaxooti ah oo ka kala yimid dalalka ugu khatar badan adduunka oo ay ka mid yihiin Yemen, Suuriya , Soomaaliya. Biden waxa uu u beddeli doonaa Minnesota xero qaxooti oo dugsiyada iyo cisbitaallada ciriiri yihiin” ayuu yiri Trump.
Hadalkaan ayaa Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa yy sheegay xilli in muddo ah kaddib uu booqasho ku tagay gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka taas oo qeyb ka ah ololahiisa doorasho kaddib dooddii kululeyd ee shalay dhex martay isaga iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka ee Joe Biden.
Previous articleMareykanka oo kordhinaya duqeymaha loo geysto Al-Shabaab
Next articleWariye Caan ah oo geeriyooday & Dowladda Somalia oo ka hadashay